Реферат - Монтаж, обслуживание и ремонт комплектной потребительской подстанции с трансформатором на 250 ква - Технология
Реферат: Монтаж, обслуживание и ремонт комплектной потребительской подстанции с трансформатором на 250 ква
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">1.Введение.
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Возникновению
<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электротехники<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">как<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">прикладной<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">науки<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">предшествовал<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">до­вольно<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">длительный<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">период<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">начиная<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">примерно<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">с<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-ansi-language:EN-US">XVI<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black">.) <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">накопления<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">знаний<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">об электричестве<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">магнетизме<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">В<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">середине<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; color:black;mso-ansi-language:EN-US">XVIII<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">М<span Arial",«sans-serif»;color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">В<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Ломоносов<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">опубликовал ряд<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">работ<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">посвященных<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">изучению<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электричества<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">в<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">частности<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">атмосферного<span Arial",«sans-serif»;color:black">.<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Однако
<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">практический<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">интерес<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">к<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электрической<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">энергии—<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">этому<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">новому<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">осо­бому<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">виду<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">энергии<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">—<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">возникает<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">лишь<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">с<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">появлением<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">источников<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">непрерывногоэлектрического<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">тока<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">—<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">гальванических<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">элементов<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">первый<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">из<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">которых<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">был<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">созданитальянским<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">физиком<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">Вольта<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 1799 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">г<span Arial",«sans-serif»;color:black">.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Среди
<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">множества<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">изобретений<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">создавших<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">условия<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">для<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">развития<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электро­техники<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">значительное<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">число<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">принадлежит<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">русским<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">ученым<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">инженерам<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Работы наших<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">соотечественников<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">послужили<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">базой<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">для<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">развития<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">важнейших<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">отраслейтеоретической<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">и<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">прикладной<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">электротехники<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Исследуя<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">гальванические<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">элементы<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Ш<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">В<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Петров<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">открыл<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электрическую<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">дугу<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (1802) <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">и<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">обратил<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">внимание<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">на<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">возмож­ности<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">ее<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">использования<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">для<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">плавки<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">металлов<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">для<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">освещения<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Русский<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">акаде­мик<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Э<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;color:black;mso-ansi-language:EN-US">X<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Ленц<span Arial",«sans-serif»;color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">обобщив<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">открытия<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Эрстеда<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Фарадея<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (1831), <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">установил<span Arial",«sans-serif»;color:black"> (1832) <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">закон<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">о<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">направлении<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">индуцированного<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">тока<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">теоретически<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">обосновал<span Arial",«sans-serif»;color:black"> (1833) <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">практически<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">доказал<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (1838) <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">принцип<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">обратимости<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электрических<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">машин<span Arial",«sans-serif»; color:black">; <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">в<span Arial",«sans-serif»;color:black"> 1844 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">г<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">им<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">был<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">установлен<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">закон<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">теплового<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">действия<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">тока<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">независимо<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">от английского<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">ученого<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Джоуля<span Arial",«sans-serif»; color:black">), <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">получивший<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">название<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">закона<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Ленца<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">—<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Джоуля<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">В<span Arial",«sans-serif»;color:black"> 1833 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">г<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">П<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Л<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Шиллингом<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">был<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">построен<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">первый<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">мире<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электромагнитный<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">теле­граф<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Петербургский<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">академик<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Б<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">С<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Якоби<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">изобрел<span Arial",«sans-serif»;color:black"> (1834) <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">первый<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">практическипригодный<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">электродвигатель<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 1838 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">г<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">впервые<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">осуществил<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электропривод<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">суд­на<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">«электроход»<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">Якоби<span Arial",«sans-serif»;color:black">). <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">В<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 1838 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">г<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">он<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">изобрел<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">гальванопластику<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">положилначало<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">гальванотехнике<span Arial",«sans-serif»; color:black">.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Первые
<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">опыты<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">по<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">передаче<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электрической<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">энергии<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">России<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">были<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">проведеныв<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 1874 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">г<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Ф<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">А<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Пироцким<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Профессор<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">физики<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Д<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">А<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Лачинов<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">теоретически<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">обо­сновал<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (1880) <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">возможность<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">передачи<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электроэнергии<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">на<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">большие<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">расстояния<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">за счет повышениянапряжения, что было убедительно доказано французским инженером М. Депре, построившим в 1882 г. линию электропередачи Мисбах — Мюнхен длиной 57 км при напряжении 2 кВ. Большоезначение этих открытий предвидели К. Маркс и Ф. Энгельс. В письме Энгельса кБернштейну (1883) сказано: «Совершенно ясно, однако, что благодаря этому(открытию) произво­дительные силы настолько вырастут, что управление ими будетвсе более и более не под силу буржуазии».
Работы М. О.Доливо-Добровольского, изобретшего трехфазный трансфор­матор и асинхронныйдвигатель (1889—1891) и детально разработавшего тех­нику трехфазной системыпередачи и распределения электрической энергии,, обеспечили создание системы,которая по сегодняшний день остается основным способом передачи и распределенияэлектроэнергии на всем земном шаре.
Славные традиции русскихэлектротехников XIXв. продолжили ученые и инженеры нашейстраны в годы расцвета электротехники при Советской власти.
Широкое, разностороннееприменение в народном хозяйстве и быту элек­трической энергии, вырабатываемойцентрализованно на мощных электростан­циях, объединенных высоковольтными сетямив энергетические системы, назы­вается электрификацией страны.
Электрификация, являющаяся стержнем строительстваэкономики комму­нистического общества, играет ведущую роль в развитии всехотраслей народ­ного хозяйства, в осуществлении всего современного техническогопрогресса.
К. Маркс и Ф. Энгельс.Соч., 2-е изд., т. 35, с. 374. м В. И Ленин. Поли. собр. соч., т. 23. с. 93—95. <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">выполнен
<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">досрочно<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">в<span Arial",«sans-serif»;color:black"> 1931 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">г<span Arial",«sans-serif»;color:black">.) <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">в<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">период<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">осуществления<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">первого<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">плана<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">индустри­ализации<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (1928<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">—<span Arial",«sans-serif»;color:black">1932). <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">В<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">результате<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">выполнения<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">второго<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">части<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">третьего<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">планаиндустриализации<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">годовая<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">выработка<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электроэнергии<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 1940 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">г<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">увеличилась<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">по сравнению<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">с<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 1913 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">г<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">в<span Arial",«sans-serif»;color:black"> 20 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">раз<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">достигла<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 40 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">млрд<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">кВт<span Arial",«sans-serif»;color:black">-<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">ч<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Нападение<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">фашистской Германии<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">прервало<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">мирный<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">труд<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">советского<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">народа<span Arial",«sans-serif»; color:black">; <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">но<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">даже<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">во<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">время<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">войнына<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Востоке<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">страны<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">велось<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">большое<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">энергетическое<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">строительство<span Arial",«sans-serif»; color:black">.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Кроме
<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">того<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">к<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">числу<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">тепловых<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">относятся<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">теплофикационные<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электростан­ции<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">ТЭЦ<span Arial",«sans-serif»;color:black">). <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">Они<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">снабжают<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Население<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">промышленность<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">одновременно<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">теплотойи<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электроэнергией<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">По<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">развитию<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">системы<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">ТЭЦ<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">первое<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">место<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">мире<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">принадле­жит<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">нашей<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">стране<span Arial",«sans-serif»; color:black">.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Гидроэлектрические
<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">станции<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">ГЭС<span Arial",«sans-serif»;color:black">), <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">построенные<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">на<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">больших<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">реках<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">по своей<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">мощности<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">составляют<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">около<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 16% <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">от<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">общей<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">мощности<span Arial",«sans-serif»; color:black">.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Роль
<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">и<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">значение<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">атомных<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электростанций<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">энергетическом<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">балансе<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">СССРбыстро<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">возрастают<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">В<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Советском<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">Союзе<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 1954 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">г<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">была<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">построена<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">первая<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">миреатомная<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электростанция<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">АЭС<span Arial",«sans-serif»;color:black">). <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">По<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">мере<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">совершенствования<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">рабочего<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">процессаи<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">оборудования<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">стоимость<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">энергии<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">атомных<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электростанций<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">приближается<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">кстоимости<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">энергии<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">ГРЭС<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Особенно<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">АЭС<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">выгодны<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">там<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">куда<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">горючее<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">нужно<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">за­возить<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">издалека<span Arial",«sans-serif»; color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">В<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">настоящее<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">время<span Arial",«sans-serif»;color:black"> 1 <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">кг<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">атомного<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">горючего<span Arial",«sans-serif»; color:black"> (<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">урана<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">или<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">тория<span Arial",«sans-serif»; color:black">) <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">по<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">теплотворной<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">способности<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">эквивалентен<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">примерно<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 2700 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">т<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">каменного<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">угля<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Мощность<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">крупнейшей<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">в<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">мире<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Ленинградской<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">АЭС<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">составляет<span Arial",«sans-serif»; color:black"> 3 <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">млн<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">кВт<span Arial",«sans-serif»;color:black">. <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Девять<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">десятых<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">энергетических<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">ресурсов<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">СССР<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">—<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">горючих<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">ископаемых<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">имощных<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">многоводных<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">рек<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">—<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">находятся<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">за<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Уральским<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">хребтом<span Arial",«sans-serif»; color:black">.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Для
<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">экономичной<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">передачи<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электроэнергии<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">на<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">сверхдальние<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">расстояния<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">со­оружены<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">мощные<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">линии<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">электропередачи<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">высокого<span Arial",«sans-serif»; color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">напряжения<span Arial",«sans-serif»; color:black">, <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">в<span Arial",«sans-serif»;color:black"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:b